Xaaladda Weriyaha Soomaaliya: Cooldoon oo Abaal marin Helay isaga oo Xiran - Somalia Focus
Xaaladda Weriyaha Soomaaliya: Cooldoon oo Abaal marin Helay isaga oo Xiran
by admin | Wednesday, Mar 15, 2017 | 277 views
16 March 2017 (SofoNews) – Waxaa uu kujiraa xabsi ay maamulaan maamulka Somaliland, isaga oo lagu eedeeyay in uu ka hor yimid danaha maamulka Hargeysa, weriye Cooldoon ayaa la qabtay xilli uu ka degayay garoonka Hargeysa.
Weriyaha oo loo diiday in uu yeesho qareeno si waafi ah ugu dooda ayaa isku day badan oo la sameeyay guuldarro ku dhamaaday si xorriyaddiisa uu u helo, waxaana maamulka Somaliland markii dambe ay bilaabeen diyaarinta eedeymo aan xiriirba la lahayn middii hore ay soo jeediyeen.
Heyadaha warbaahinta iyo kuwa udooda xuquuqda aadamiga ayaa dhaleeceeyay xariga wariyaha, iyaga oo ka codsaday Somliland in ay shuruud la’aan ku sii daayaan. Taageerada uu u muujiyay midnimada Soomaaliya iyo in uu taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo ayaa kamid ah waxyaabaha sida daran ay uga caroodeen madaxda Hargeysa.
Hadaba, wariye Cooldoon ayaa waxaa shaqadiisa ee la xiriirta taakuleynta dadka danyarta ah, waxaa aqoonsaday urur abaalmarin bixiya kaasi oo fadhigiisu yahay London, England.
Sanadkiiba mar ayay abaalmarino gudoonsiyaan xubno la soo xulo kaddibna loogu codeeyo shaqada ay qabtaan, waxaana sanadkan dadka abaalmarinta bulshada qaatay kamid ahaa Cooldoon.
Soomaaliya ayaa ah dalka ugu badan ee lagu dhibaateeyo wariyayaasha qaaradda Africa, waxaana la dilay kudhowaad 13 saxafi tan iyo sanadkii 2013.
Heyadda Human Right Watch ayaa dhowaan qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Booliiska Qaranka uu ka gaabiyay baarista dilalka weriyayaasha, iyada oo aanu jirin kiisas la baaray marka laga reebo wariye katirsanaa Kooxda mucaaradka ah ee al-shabaab, kaasi oo la toogtay marka maxkamadi ay xukuntay.
Madaxweynaha cusub iyo wasiirka koowaad oo dhowaantan kalsoonida la siiyay ayaa si wadajir ah u ballan qaaday wada shaqeynta saxaafadda madaxa banaan.
Ardayda Soomaaliyeed ee K/Africa oo culeys soo food saaray
Dagaal ka dhacay Muqdisho iyo Boqolaal Xabsiga la Dhigay